Toonz, isoftware yoopopayi esetyenziswe kwiFuturama, iya kuba simahla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Isoftware yoopopayi esetyenziswe kwi-Futurama kunye ne-Studio Ghibli kungekudala iza kukhululeka
Akululanga ukufikelela kwisoftware abayisebenzisayo kwimveliso yoopopayi yeklasikhi kunye ne-3D ngendlela eyiyo ngokupheleleyo. Ukuba le software ayisetyenziswanga, i amathuba anqunyelwe ukuba umntu akanayo italente enkulu ekuzobeni okanye kwimveliso, into enokufunyanwa ngokusebenza kwizitudiyo zoopopayi okanye ngokuya kwisikolo esigxile kwimfundo.
Oko kusikelwa umda kuyakususwa kwangoko njengoko kunokwenzeka namhlanje xa bekuxeliwe ukuba isoftware yoopopayi UToonz uya kufumaneka simahla kunye nomthombo ovulekileyo kwakamsinya. Oku kuyakuvumela nabani na ukuba afumane isoftware ayisebenzisayo ukubalisa amabali kunye nokuveza iitalente zabo zobugcisa.
I-Toonz sisixhobo esisetyenziswe zizitudiyo ezikumgangatho ophezulu ezinje ngeRough Draft kunye ne Studio Ghibli. Owokuqala wayisebenzisa uthotho lwe-Futurama kunye noGhibli weNkosazana uMonoke kunye nohambo lukaChichiro.
Eyona nto ilunge kakhulu, inguqulelo yasimahla kaToonz izakuquka ezinye zeempawu ezizezakho kunye nesiko Zazisetyenziswa bhanyabhanya yeGhibli iminyaka embalwa. Ke unokufikelela kwiimpawu ezithile ezonga ixesha kunye nomzamo wokumilisela eyakho imifanekiso emfutshane.
Inguqulelo yeprimiyamu kaToonz iya kufumaneka kuye nawuphina umntu ofuna ukufumana izixhobo ezizodwa, nangona inguqulelo yemithombo evulekileyo yasimahla iya kufumaneka ngoMatshi 26. Yonke into isiganeko sehlabathi sopopayi nakubo bonke abo bazobi bangenathamsanqa lokuya kwisikolo sopopayi ukuba bafunde ubuchule okanye izixhobo zesoftware ezinje ngeToonz.
Ukuba uzimisele ncama iinyanga ezimbalwa zobomi bakho Ukuzibeka kuhlobo lokuvelisa okwahlukileyo koopopayi, phawula uMatshi 26 kwikhalenda yakho ngoku.
Malunga nalo studio ghibli kutshanje senze into ekhethekileyo eMiyazaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Isoftware yoopopayi esetyenziswe kwi-Futurama kunye ne-Studio Ghibli kungekudala iza kukhululeka
URicardo Alegria sitsho
UMatías Latorre Benavides ebezimase: O
Phendula uRicardo Alegria
USergio Garcia sitsho
UCarlos Devís Sanjuán
Phendula uSergio Garcia
UCarlos Devís Sanjuán sitsho
Iphawulwe ngoMatshi 26 kwikhalenda * _ *
Phendula uCarlos Devís Sanjuán
'Iiorenji zegazi', nguEric Wert, edluliswe nguDeepDream
Imifanekiso eqingqiweyo yezilwanyana ezimangalisayo eyenziwe ngomthi nangentsimbi nguJason Waldron [IiVidiyo]